CASAMAMBU - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguFederico
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uFederico iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Embindini wedolophu, amanyathelo ama-2 ukusuka kuzo zonke iinkonzo kunye nesikhululo sikaloliwe (transappenninica Bologna Pistoia). Indlu ebanzi kumgangatho wesibini. Igumbi lokulala eliqeshisayo linendawo yokuhlambela, iindawo eziqhelekileyo zimnandi kwaye zikhulu kakhulu. Kwigumbi lesidlo sakusasa kukho indawo yomlilo, imigangatho yeyokuqala ukusuka kwi-1930s. Kukho elinye igumbi lokuhlambela eliqhelekileyo, igumbi elikhulu kakhulu elineefestile ezimbini zaseFransi ezijonge ithala elijonge kwisikwere. Iilwimi: IsiTaliyane, isiNgesi, isiJamani
Igumbi elikhulu, elizolileyo, ngaphakathi. Ubuninzi babucala, akufuneki uwele nakweyiphi na indawo eqhelekileyo ukuze ufikelele kuyo.
Ukubanakho kokongeza ibhedi enye esongwayo.
Bonisa i-cradle yeentsana kunye nezinye izinto ezithuthuzelayo zokwamkelwa kwabantwana abancinci (isihlalo esiphezulu, itafile yokutshintsha, njl ...)
4.88 · Izimvo eziyi-26
Indlu apho indawo ibekwe khona ibekwe kwindawo esembindini kwisikwere esiphambili: kukho iivenkile kunye neendawo ezahlukeneyo zikawonke-wonke apho kunokwenzeka ukuba kutyiwe ii-aperitifs kodwa kunye nezitya ze-gastronomic kunye nokutya kwasekhaya ngamaxabiso ahlukeneyo ngokufumaneka komntu ngamnye. Imarike yenzeka ngoMgqibelo.
Kufuphi nendlu, ibhuloho yeempawu ezidibanisa indawo kunye neyona nxalenye yembali kunye nokufikelela kwiindlela ezimfutshane / eziphakathi, ezikhokelwa yimiqondiso, ukufikelela kwizikhundla eziphezulu kwaye ujabulele i-panorama enikezelwa yi-Apennines.
Umbuki zindwendwe ngu- Federico
Emini ndingekho ndiya emsebenzini kodwa ndifumaneka nakweyiphi na imfuno.
Inombolo yomthetho: 3391434027
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Porretta Terme